विष मिसाएको मिठाई र नेपाली जनता – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
विष मिसाएको मिठाई र नेपाली जनता
- घननाथ सापकोटा “विकास”
झण्डै आजभन्दा १०० वर्ष अगाडि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा क्रान्तिनायक माओत्सेतुङले भन्नुभएको थियो । चिनियाँ जनताको मुक्तिको बाधक दुइ ठूला पहाडहरु हुन् । ती दुइ ठूला पहाडहरु माथी बिजय प्राप्त नगर्दा सम्म चिनिया जनताको मुक्ति संभव छैन । ती पहाडहरु हुन् साम्राज्यवाद र सामन्तवाद । साम्राज्यवादको नेतृत्व जापानले गरेको थियो सामान्तवादको नेतृत्व च्याङकाइसेकको सरकारले गरेको थियो । अध्यक्ष माओले नेतृत्व गरेको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले जापानि साम्राज्यवाद माथी बिजयप्राप्त गरेर चिनलाई मुक्त बनाउने काम भयो । सामन्तवादको नाइके च्याड्ड काइसेकको सरकार माथी बिजय प्राप्त गरेर देशमा जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने काम भयो ।
वर्तमान हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा पनि यो कुरा ठयाक्कै मेल खान आएको छ । हाम्रो देशमा दुइ ठूला पहाडहरुले नेपाली जनताको मुक्ति र भविष्यको बाधक बनेका छन् । ती पहाडहरु हुन् अमेरिको साम्राज्यवाद तथा भारतिय बिस्तारवाद र घरेलु दलाल प्रतिक्रियावादी सरकार । यी दुइवटा पहाडहरुले जसरी गिद्धे सिनो लुञ्छदाझै नेपाललाई लुछि रहेका छन् । वर्तमानमा घरेलु दलाल प्रतिक्रियावादी सरकारको नेतृत्व ओली सरकारले गरेको छ । आज भन्दा एक वर्ष अगाडि परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले अमेरिकाको सैन्य रणनीति इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा संझौता गरेर आएका रहेछन् जुन हालसम्म गुÇचुप राखेका थिए । केहि समय अगाडिसम्म इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा मैले संझौता गरेको छैन् भनेर भने हाल आएर बुझ्दा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन राष्ट्रघाति आर्थिक लगानी सहित संझौता गरेको सहि ठहर्न आएको छ । उता भारतले कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक आÇनो नक्सामा पारेर सार्वजनिक गर्दापनि ओली सरकार मौनता साधेर बसेको छ । राष्ट्रघातको नमूना यस्तो छ । अर्काे देशमा भ्रष्ट्राचार दिन दुइगुणा रात चौगुणा मौलाएर गएको छ । पुर्खाहरुले बचाई राखेको खाली सार्वजनिक सरकारी जग्गा कुलो नहर मठमन्दिर पानीघाट सबै कमिशनको भरमा सत्तामा पहुँच हुनेका नाममा दर्ता गरिएको छ । कतिपय ठाउँ कौडीको भाउमा ठेक्कामा दिइएको छ । बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा डबल नेकपाको महासचिव बिष्णु पौडेलको छोरा नविन पौडेलको नाममा पारीएको छ । गोकर्ण जड्डलको जग्गा कमिशनको खेलमा सस्तो मूल्यमा यति समूहलाई ५ वर्ष बाँकी छदाँछदैं २५ वर्ष म्याद थपिएको छ । ३३ किलो सुनकाण्ड, ह्वाइटबडीकाण्ड, काठमाण्डौं टुडीखेलको जग्गाकाण्ड, आयलनिगमको जग्गा खरिदकाण्ड लगायत जहाँ जे काम गर्दा होस् त्यहाँ भ्रष्ट्राचार घुसेकै छ,जसरी हुन्छ देशलाई लुछि एकै छ । निर्मला पन्त जस्ता १३ वर्षिया बालिमा बलत्कार भएर मात्र सुख पाउँदैनन् प्राण पखेरु नै उडाइन्छ । सरकार त्यस्ता बलत्कारी हत्याराहरुलाई कार्बाइ गर्नको साटो संरक्षण गर्दछ । कुरा यति मात्र होइन् दाँइजोको नाममा दिनहुँ छोरी चेलीहरुको हत्या भएको छ । चाहे बोक्सीको नाममा होस् चाहे जातिय विभेदका कारणले होस् महिलाहरुको जीवन जोखिममा छ । महिलाहरुको अनुहारमा एसिड छरिन्छ ओली सरकारले सुरक्षा र न्याय दिन सकेको छैन । सरकार देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने हैसियत राख्दैन तर पत्रकार जगत र नेपाली जनताको वाक स्वन्त्रतामा अकुंश लगाएर लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँन खोजीरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हाम्रो देशलाई अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतिय बिस्तारवादले चारैतिरबाट घेरीरहेका छन् । भारतले हाम्रो देशलाई आर्थिक भौतिक साँस्कृतिक रुपमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । जसको उत्कर्ष रुप कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक आÇनो नक्सामा पारेर सार्वजनिक गरेको छ । उता अमेरिकाले संसारै भरि आÇनो साम्राज्य बिस्तार गर्ने सन्दर्भमा साना कमजोर देशहरुमा द्धन्दको बिजारोपण गरेर आफ्नो कठपुतली सरकार गठन गर्ने र ती देशहरुमा आÇना सेना तैनाथ गरेर औपनिवेश कायम गरेर त्यँहाको सबै प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्नु हो । जस्तै इराक, कुबेत, अफगानिस्थान, दक्षिणकोरीया लगायत ५० देशमा उसले आÇनो सैन्य क्याम्प राखेको छ । शिरियामा द्धन्दको बिजारोपण गरेको छ । अर्काे मिलिनियम न्यालेन्ज कर्पाेरेशन वगरेले खसीलार्य देखाउने हरियो घाँस हो । जसरी वगरेले खसीलाई घाँस देखाएर गर्दनमा खुकुरी बर्जाछ त्यसैगरी अरब आर्थिक सहायता देखाएर नेपालमा अमेरिकी सेना राख्ने र नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गर्ने अन्तमा सार्वभौम स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने रणनीति अन्र्तगतको षणयन्त्रको चाड्ड हो । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन अन्र्तगतको आर्थिक साहायता लागु गर्दा प्रत्येक योजनान भारतसंग स्वीकृत गराउन पर्ने यो किन जरुरी छ ? नेपाल र अमेरिकाको द्धिपक्षिय सम्बन्धमा तेस्रोृपक्षलाई किन घुसाइयो यहाँ पनि ठूलो षणयन्त्र छ । अर्काे नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुलाई समाप्त पारेर नेपाली जनतालाई सदासर्वदा साम्राज्यवादको चड्डगमा राख्ने षणयन्त्र पनि हो । अर्काे विषय हाम्रो छिमेकी मुलुक चिन आर्थिक रुपमा तीव्र विकास गरेर संसारमै उदियमान भएर आएको छ । उसले आर्थिक रुपमा अमेरिकालाई टक्कर दिने हैसियतमा पुगेको छ । चीनको प्रगतिलाई अमेरिकाले देख्न सक्दैन यसकारण पनि चीनलार्य कमजोर बनाउन उसले अझ भारत हुँदै नेपालमा सैन्य अखडा खडा गरेर चीनमाथी आक्रमण गर्ने योजना छ। यसका पनि दुइवटा विधि छन् पहिलो सोझै चीनमाथी आक्रमण गर्ने दोस्रो चीनलाइै चारैतिरबाट घेरा बन्धी गरेर एकचित नीतिको विरुद्ध तिब्बतलाई अलग गराए चीनमाथी आक्रमण गर्ने योजना बनाएको छ । यदि अमेरिकाको यो रणनीति सफल भयो भने नेपाल अमेरिका र चीनको युद्ध भूमि हुनेछ ।
जब अमेरिकाले नेपालमा बसेर चीन विरोधी गतिविधी गर्न थाल्यो भने चीनिया सेना पनि हातमा दहि जमाएर त बस्दैन उसले पनि नेपालमा रहेका अमेरिकी सेनाको क्याम्पमा आक्रमण गर्दछ । उक्त आक्रमणबाट थुप्रै नेपाली धनजनको क्षति अवश्यँ भावी छ । यसकारण हाम्रो स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक नेपाललाई कुनै पन िहालतमा विदेशीहरुको हस्तक्षेप तथा युद्ध स्थल हुन दिनु हुँदैन । हाम्रो भूमि प्रयोग गरेर हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु माथीको आक्रमण होस् या कुनै पनि गलत प्रकारका गतिविधी कसै गरे पनि हुन दिन हुन्न । आज हाम्रो देशमा दुइवटा धु्रव खडा भएका छन् । एउटा साम्राज्यवादी राष्ट्रघाति दलालधार जसको नेतृत्व खड्गप्रसाद ओली, प्रदिप ज्ञवाली, गोकुल बास्कोटा, बिष्णु पौडेल, सुवासनेमाड्डहरुले गरेका छन् । उनीहरुले यो मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन जसरी पनि संसदबाट पास गरेर नेपालमा लागु गर्नु पर्दछ भनेर कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । अर्काे राष्ट्रवादी धार यो विष मिसाएर हुदैन नेपालमा यो योजना लागु गर्नै हुदै्रन भनेर लागि रहेकाछन् । जसको नेतृत्व मिपरावल, देव गुरुड्ड लिलामणी लगायतकाहरुले गरेका छन् । डबल नेकपाका दुइ नक्बरी अध्यक्ष प्रचण्डले यस प्रकारको रणनीतिलाई पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । उता नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले यस घटनालाई यदि संसदबाट पासभएन भने विद्रोह गर्ने धम्की दिएर राष्ट्रघाति चरित्र देखाएको छ। राजनैतिक पार्टीहरुमा मोहन वैद्य (किरण) ले नेतृत्व गरेको ने.क.पा. (क्रान्तिकारी माओवादी) र देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाे नेपालले यो साम्राज्यवादी र विस्तावादी हस्तक्षेपलाई कुनैपनि हालतमा नेपालमा लागु गर्न दिनु हुँदैन भनेर सडक सघर्षको घोषण गरिसकेको छ । यसकारण अब हामी ३ करोड नेपाली जनताको अगाडि एउटा चुनौती खडा भएको छ । हाम्रो देशको सार्वभौम स्वतन्त्रता रक्षाको लागि राष्ट्रवादी धारामा खडा हुने की खड्ग ओलीहरुले नेतृत्व गरेको राष्ट्रघातीधारमा खडा हुने ? निश्चित पनि हामी मुलुकको अश्मिता लुटिएको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौं । यसकारण देश भक्तिपूर्णधारमा लामबद्ध भएर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई हाम्रो मुलुकमा पस्न दिनु हुँदैन फलामे ढोका लगाएर बन्द गर्नुपर्दछ धुलो चटाउनु पर्दछ । देशभित्रका अमेरिकी गुलाम राष्ट्रघातिहरुलाई लोप्पा खुवाउन पर्दछ । यसरी मात्र हाम्रो देशको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिन्छ र सच्चा देशभक्तिको परिचय दिन सकिन्छ । बाटो कठिन भएपनि सामन नगरिकन सुखै छैन ।